Ukuphinda-phinda kwi-YouTube-Vula ngokulula iiVidiyo ze-YouTube-Mamela umculo ngaphandle kokuphazamiseka
I-Loop kunye nokuphinda iVidiyo ze-YouTube
Phinda udlale iividiyo ze-YouTube ngaphandle kokucinezela
Iividiyo ze-Loop ze-YouTube ngendlela elula. Usebenzisa iLoop yeYouTube ungayiphinda ividiyo epheleleyo okanye ukhethe inxalenye yayo, khangela kwiYouTube, qala iividiyo ezininzi ngexesha elinye!
Khangela okanye wenze i-YouTube Phindaphinda.
Phinda iividiyo zikaYouTube ezigcweleyo okanye ezinenxalenye usebenzisa iLop yeYouTube
I-YouTube Repeater ivumela nabani na ukuba afumane iiVidiyo zeYouTube okanye amacandelo asikelwe ixesha kunye neevidiyo ngokuchofoza nje imouse. Phindani ngokungapheliyo iividiyo zomculo, iividiyo ezihlekisayo, okanye iividiyo ezibonakalayo njengeziko lomlilo okanye i-aquariums, kwaye wabelane nabahlobo bakho!
Ungayibeka njani ividiyo ye-YouTube kwakhona
Ngaba iluncedo nini ividiyo yeYouTube kwi-loop engapheliyo
∞ Xa ubukele ividiyo ye-YouTube efundisayo kwaye kufuneka ubukele inxalenye yayo iphindaphindwe.
∞ Xa usivile umculo omawuchatshazelwe kakhulu ukuba umamele uphinda-phinde ...
∞ Xa kufuneka ubukele le vidiyo ehlekisayo kangangexesha eli-1000 ngaphandle kokuthatha isenzo ngesixhobo.
∞ Xa ufuna ukubukela iividiyo zeYouTube ngaphandle kwezentengiso.
Iqhosha eliphindaphindiweyo le-YouTube
Fumana iQhosha lokuphindaphinda le-Youtube yeChannel, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Phinda u-YouTube ← Tsala oku kwibha yeebhukumaki zakho
❝Esi skripthi sikunceda ungene kwiividiyo ze-YouTube ngokuzenzekelayo.❞
Usebenzisa iLoop yeYouTube unako
Phinda, Sika kunye neLop
Yenza yonke iividiyo zeYouTube okanye ubeke amacandelo ayo ephindweni, emva koko wabelana ngendalo yakho nabahlobo bakho!
Ukudlala kwakhona kweYouTube
Phinda iividiyo ze-YouTube ngokuzenzekelayo (okanye iinxalenye zazo, zenzelwe loo nto)
Bukela ividiyo yakho oyithandayo kwi-YouTube ngokuphindaphindiweyo ngaphandle kokucinezela okuphindaphindiweyo.
Isityalo, Sika iLop engapheliyo
Yenza iLoop, tyala indawo oyithandayo yevidiyo emva koko udlale epheleleyo okanye iinxalenye zeevidiyo zeYouTube kwilog engenasiphelo.
Yenza ixesha loshicilelo lwakho (ukuqala / ukuphela)
Inkxaso yeeparamitha zexesha le-YouTube.
Uluhlu lokudlalwa kweYouTube
Yenza uluhlu lwakho lokuDlala ngaphandle kokuloga.
Backup okanye ubuyisele uluhlu lokudlala.
I-YouTube iphindaphinda uluhlu lwadlalwayo, isishwankathelo okanye ukuphinda uluhlu lokudlala lwe-YouTube.
Lawula iividiyo ze-YouTube ezilayishwe.
Bukela i-Youtube kwiscreen esipheleleyo ngaphandle kweentengiso kwikhompyuter kunye ne-smartphone.
Ikhuphela ngokuzenzekelayo ukuze ilingane nesixhobo sesikrini
Khawuleza okanye uhle kancinci
Yehlisa iingoma ze-Youtube okanye ukhawuleze iividiyo.
Yongeza iqhosha lokudlala kwi-thumbnail.
Guqula isihloko ngaphambi kokuba wabelane.
Khangela iividiyo zeYouTube ngendlela ekhululekileyo.
Akukho ntengiso zicaphukisayo.
Inkxaso kuwo onke amaQonga aNomdla
Ungasebenzisa i-YouTube Looper nakweyiphi na iqonga lakho olithandayo njengesixhobo seWindows, umatshini weLinux OS, umatshini weMac, iChannelbook, i-Android, okanye i-iPhone, i-iPad, i-Smart TV.
Ukukhawuleza kunye nokukhululeka kungenangqumbo.
Yinkonzo yasimahla kwi-Intanethi.
Akukho akhawunti, akukho kukhutshelwa, umculo kuphela.
Iividiyo ze-YouTube ngokulula-Mamela umculo ngaphandle kokuphazamiseka
Ungayiphinda kanjani iVidiyo ze-YouTube ngokuzenzekelayo
Kukho iindlela zokujikeleza izithintelo eziphindaphindiweyo ze-YouTube
Khangela ividiyo yakho oyithandayo okanye faka i-URL ye-YouTube (okanye i-ID yevidiyo) yevidiyo ofuna ukuyiphindaphinda kwibhokisi yegalelo elapha ngasentla. Okanye usebenzise i-Youtube ukuphinda iqhinga elingezantsi.
Guqula unobumba ongena endaweni t ngoonobumba x Kwicandelo le-YouTube emva koko cinezela Enter. Ividiyo yakho iya kuphinda iluphule ngokuqhubekayo.
- Ividiyo efumaneka rhoqo kwi-YouTube
- Uhlobo lweselfowuni
- Amakhonkco kwilizwe (uk, jp, ...)
- Ifutshane i-URL
Unokwenza njani iYouTube Video edlala ngokuqhubekayo
I-YouXube ikuvumela ukuba udale iLoop ukuphinda ividiyo epheleleyo okanye icandelo elithile. Ukwenza iLoop unokukhetha ividiyo ngenye yezi ndlela zilandelayo:
Inyathelo lokuqala: Khetha ividiyo
Ukuphinda iividiyo ze-YouTube, ncamathisa nje i-URL yevidiyo ye-YouTube kwindawo yokukhangela.
Ukusuka kwisiphumo sophando
Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi ividiyo oyifunayo kuLoop, unokukhangela iividiyo zeYouTube. Kwiphepha elilandelayo uya kufumana iziphumo zophando onokuthi ukhethe kuzo ividiyo oyithandayo.
Inyathelo lesibini: Sika
Layisha ividiyo ye-YouTube phakathi kweefreyimu zamaxesha
Nje ukuba ukhethe ividiyo yakho, unokutshintsha amaxesha okuqalisa nawokuphela. Tsala ngokulula izikhombisi zokuqalisa kunye nokugqiba ukuya kumaxesha ongathanda. Ngoku unokuphinda ividiyo yakho oyithandayo.
Ngokuzenzekelayo, ixesha lokuqala / lokugqibela lixesha lokuqalisa / lokugqibela levidiyo.
Inyathelo lesithathu: Yenza isihloko sevidiyo
Qamba igama kwakhona
Unokuyinika igama kwakhona iLoop kuyo nayiphi na into ongathanda ukuyenza. Vula iLoop egciniweyo, tshintsha igama kwaye ucofe Gcina iqhosha.
Inyathelo lesine: Yenza ngokwezifiso iikhamera zevidiyo
Ungabelana ngeevidiyo zakho ze-YouTube ezivuliwe kwimithombo yeendaba oyithandayo njenge: Facebook, Twitter, Pinterest, i-imeyile, kunye ne-WhatsApp okanye umyalezo obhaliweyo.
Ngaphambi kokuba wabelane, yenza umfanekiso we-Youtube wesiko leevidiyo zakho ukuze wenze abantu babe nomdla.
Ukuze usebenzise iLoop ye-YouTube kufuneka ube nesikhangeli esisebenzayo se-HTML5.
Fumana imibuzo kunye neempendulo zakho apha-Ungayilayisha njani iividiyo ze-YouTube?
+ Yintoni iLoop yeYouTube?
Sisisixhobo sewebhu esidlala iividiyo zeYouTube kwi-loop engenasiphelo, oko kuthetha ntoni: ividiyo iqala kwakhona ngokuzenzekelayo ngaphandle kongenelelo emva kokufikelela esiphelweni.
+ Ungayiphinda kanjani okanye uyikhuphe iividiyo?
Ukufumana ividiyo ye-YouTube ukuze iphindaphinde kwilogu kunokuvakala njengomsebenzi osisiseko, kodwa ngelishwa kunzima ukwenza kwaye kunokushiya ababukeli abaninzi bedidekile.
Ngethamsanqa, kukho iindlela ezintathu ezilula zokuvula ividiyo oyithandayo yomculo we-YouTube okanye umboniso bhanyabhanya, kwaye bonke bakhululekile ngokupheleleyo kwaye basebenza ngamaqonga onke, kubandakanya i-iPhone kunye nee-smartphones zeWindows kunye neeWindows, iiMac kunye neekhompyuter zeLinux.
• Indlela 1. Kwi-YouTube: cofa ekunene kwiifestile zevidiyo kwaye ucofe iLoop
• Indlela 2. Kwi-YouXube:
- Khangela ividiyo usebenzisa ibhokisi yokufaka eqongeni, ukhethe ividiyo enye kuluhlu lweziphumo.
- Khuphela i-URL yevidiyo ye-YouTube ongathanda ukuyivula kwaye ubeke i-URL yevidiyo ye-YouTube kwibhokisi yokufaka ephezulu ephepheni kwaye ucinezele i-infinity icon ∞
- Khuphela i-ID yevidiyo ongathanda ukuyivula kwaye ubeke isazisi sevidiyo ye-YouTube kwibhokisi yokufaka ephezulu ephepheni kwaye ucinezele i-infinity icon ∞
• Indlela yesi-3: Faka usetyenziso lwasimahla loMculo kwi-iPhone, iPad, okanye iPod touch (kukwakho nezinto eziphindaphindiweyo zikaYouTube kwizixhobo ze-Android).
+ Ungayilayisha njani iividiyo ze-YouTube kuMkhangeli weWebhu?
Ngaba ikhona indlela yokubukela iividiyo zeYouTube ngesantya esiphezulu kune-2x?
⓵ Okwangoku, i-YouTube ikhawulezisa kuphela ukudlalwa kwevidiyo amaxesha ama-2.
⓶ Cofa ngasekunene kwindawo yevidiyo, okanye ucofe ubude ukuba usebenzisa isikrini sokuchukumisa.
⓷ Khetha iLoop kwimenyu.
Ukusuka kule nqaku ukuya phambili, ividiyo iya kujika ngokuqhubekayo de ukhubaze uphawu, nto leyo onokuyenza ngokuphindaphinda amanyathelo angaphezulu ukukhangela ukhetho lwe-loop, okanye ngokuvuselela iphepha.
+ Ungayivula njani iividiyo ze-YouTube kwi-iPhone okanye kwi-iPad ngaphandle kokufaka usetyenziso?
Kwikhompyuter eyikhompyuter okanye kwikhompyuter yelaptop, i-YouTube ikuvumela ukuba uyiphinde ngokuzenzekelayo ividiyo oyibukeleyo. Ukongeza, kukho iinkonzo zasimahla, zomntu wesithathu ezinokukunceda ukuphindaphinda ividiyo.
Ukuba ufuna ukuzama enye indlela yokuvula ividiyo ye-YouTube kwikhompyuter okanye usebenzisa isixhobo esinjenge-smartphone esingabonisi ukhetho kwimenyu efihliweyo, iwebhusayithi ye-YouXube yenye indlela elungileyo.
I-YouXube yiwebhusayithi yasimahla evumela nabani na ukuba aqalise ukuphinda ividiyo ye-YouTube ngokufaka i-URL yevidiyo kwicandelo lakhe lokukhangela. Eyona nto ilunge kakhulu, oku kunokwenziwa nakweyiphi na ibrawuza kuso nasiphi na isixhobo.
+ Ndizikopa njani kwaye ndizincamathisele ii-URL zeYouTube kwizixhobo eziselfowuni?
Kwikhompyuter, unokukopa ngokukhawuleza ikhonkco kunye nesinqumli sekhibhodi Ctrl + C kwaye unamathisele ikhonkco ngendlela emfutshane Ctrl + V.
Kwisixhobo esiphathwayo, cofa ubambe uze ukhethe ikopi okanye unamathisele ukhetho.
+ Ngaba eli phepha liqabane likaYouTube?
Eli phepha alidibananga ne-YouTube.
Le ndawo ayiliqabane le-YouTube kwaye ayisiyiyo indlela esemthethweni yokudlala iividiyo zeYouTube ukuphindaphinda, yinto yesibini engenye.
+ Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa le nkonzo iphindaphindiweyo ye-YouTube?
Ukhuseleko yinto ephambili yethu, ngoko ke yonke intengiso yabantu kule webhsayithi ibhalelwe i-SSL. Ngale protocol yenethiwekhi ekhuselekileyo, idatha yakho ikhuselwe ekufikeleleni ngumntu wesithathu.
+ Ngaba iyathutha ividiyo yeYouTube, ngelixa uyibukele?
Qala kwakhona isikhangeli sakho.
Jonga ukusetyenziswa kweCPU kwikhompyuter yakho okanye ngefowuni okanye ngethebhulethi. Ukuba ubona iphezulu kakhulu (ngaphezulu kwe-80%) zama ukubulala ezinye iinkqubo, okanye uqalile isixhobo sakho.
Ukuba kunokwenzeka ukutshintshela kumgangatho osezantsi wevidiyo ye-YouTube (480p okanye ngezantsi).
+Ungayibukela njani iividiyo zeYouTube kwi-Slow Motion okanye kwi-Motion ekhawulezayo?
Ungasitshintsha njani isantya sokudlalwa kwevidiyo kwiYouTube?
Landela la manyathelo
Vula nayiphi na ividiyo ye-YouTube kwisiphequluli sakho
Jonga ezantsi-ngasekunene komdlali kwi-cog yeesetingi (kunokuba ithi i-HD ngaphezulu kwayo)
Cofa kukhetho lweSantya (kufanelekile kwi-default ngokuzenzekelayo)
Khetha isantya sakho sokudlala
Ukwenza ngokucotha: 0.25, 0.5, 0.75
Ukunyusa isantya: 1.25, 1.5, 2
Ngenye indlela, unokuvula ividiyo kwi-Youxube, enamaqhosha amabini okunyusa okanye ukunciphisa isantya kumlawuli.
Le yimpendulo kwimibuzo efanayo.
Ungakukhawulezisa njani ukukhawulezisa okanye ukuthoba iividiyo ze-YouTube?
Ungayibukela njani iividiyo zeYouTube ngesantya esikhawulezayo?
Ngaba singafumana ukonyuka kwisantya sokudlala kwakhona?
Uyidlala njani iVidiyo zeYouTube kwi-Slow Motion okanye kwi-Motion ekhawulezayo?
+ Ungayikhawulezisa njani iividiyo ze-YouTube (2x, 3x nangaphezulu kwe-4x)?
Okwangoku, i-YouTube ikhawulezisa kuphela ukudlalwa kwevidiyo amaxesha ama-2.
+ Ukutshintsha kwesantya sokudlala kweYouTube kwi-Android kunye ne-iPhone?
Ngaphambi kokuba siqale, qiniseka ukuba uye kwiVenkile yeeVenkile okanye kwiGoogle Play kwaye uvuselele kuhlobo lwamva nje lwe-YouTube.
Vula nayiphi na ividiyo ye-YouTube
Cofa ividiyo ukuze uwabone onke amaqhosha afakwe kwiscreen
Thepha amachaphaza amathathu kwikona ephezulu kwesokudla kwesikrini sakho. Oku kuya kuvula iqela leesetingi zevidiyo.
Uluhlu lweesetingi, cofa isantya sokudlala. Kufuneka isethwe ku-Ongaqhelekanga ngokwakhona.
Cofa nje kwisantya osifunayo, kwaye nonke niseti.
Xa ukwiselfowuni okanye kwi-iPhone, ukuba ukhetha ukudlala iividiyo zeYouTube kwisidlali sewebhu (m.youtube.com) endaweni yenkqubo yeselfowuni yemveli, unokutshintsha isizinda sakwaYouTube sibe yi-YouXube.
+ Ungayivula njani ividiyo ye-youtube ukusuka kwindawo ethile?
Uyirhola njani ividiyo ye-YouTube phakathi kweefreyimu zamaxesha?
Tsala isilayidi kwiWebhusayithi ephindaphindiweyo yeWebhu ukuze ulayishe kuphela inxalenye yevidiyo.
+ Ungaluvula njani uluhlu lokudlala lwe-YouTube kwiselula?
Vula naluphi na uluhlu lokudlala lweYouTube kwibrawuza yakho
Guqula i-domain ye-YouTube ibe yi-YouXube kwaye yonke imiselwe.
Isixhobo esilula sevidiyo sikaYouTube
Ukwenza i-Loop akukaze kube lula! Yenza utshintsho oluzenzekelayo lwevidiyo ye-YouTube okanye inxenye yalo ...
App enkulu, iilogo lolona ncedo lufanelekileyo lokufunda iinxalenye zeengoma ukudlala okanye ukucula.
I-Pathologist yentetho-uLwimi, London
Yile nto bendifuna ukuyiphinda-phinda amacandelo omculo njengoko ndidlala nawo ukuze ndiziqhelanise. Inxalenye yesabelo iya kuba yinto entle yokwabelana ngeenxalenye zevidiyo nabanye abantu kulo naliphi na iqela labafundi / iqela / neqela leqela.
Utitshala weSikolo esiphakamileyo, Paris
Ndisebenzisa le app ukwenza uluhlu lokudlala kwindlela yam yokuzilolonga. Unokuphinda ingoma enye okanye ukhethe i-auto-play ekwenza ukuba umamele wonke umculo kuluhlu lokudlala. Isicelo esithembekileyo.
Umhlalutyi woKhuseleko loLwazi, Silicon Valley
Ndiyayithanda indlela onokuyenza ngayo ilaphu phakathi kwamaxesha athile evidiyo! Ngokuqinisekileyo ndiyinxalenye yam endiyithandayo.
Thanda le app! Kwenza ukuba kube lula ukuphulula iingoma zam endizithandayo!
Umcebisi wezeMali, Amsterdam
Yile nto kanye endiyifunayo. Njengomfundi womculo, ndingamamela iingoma ndizama ukufunda kwi-loop ngaphandle kokubetha ngokudlala okuphindaphindiweyo.
Ndiyathanda ukuba ividiyo ihlala ixesha elide kunokuba uyifuna, ungayinqamlela. NDIYAKUTHANDA OKO. Akukho glitches okanye iintengiso, ndibona akukho sizathu sokuba ungayithandi.
Le yeyona app intle isebenza kanye njengoko ichaziwe. Ndonwabile kakhulu ngayo kwaye ingacebisa.
Umculo endiwuthandayo kwaye ndiwafaka kwi-loop undanelisa nje kwaye uyandinceda ndiphumle.
Ingcali yezibalo, Barcelona
Uthando lolu setyenziso lunceda kakhulu xa ungafumani hlobo lwengoma oyifunayo kwi-YouTube Enkosi ngokwenza le app.
Ukuza kuthi ga ngoku, yile nto kanye endandiyifuna ndodwa kwaye ndiziqhelanise neenxalenye ezithile zekatala.
Ugqirha wezengqondo, Rio De Janeiro
Ndiyayibulela kakhulu le app imangalisayo, ngelishwa i-YouTube ayisixhasi isici se-loop kodwa ndiyabulela ngokwenza le app.
Uyilo lweNethiwekhi yeKhompyuter, San Francisco
Kuyinto entle kubaqalayo njengoko banokuyikhulula kwaye bafunde le ngoma ngokulula
Isebenza kakuhle kuzo zonke iividiyo hayi umculo kuphela.
Umphathi wezeMali, Florence
Iyaphinda ngaphandle kokumisa ukuze ndilale kakuhle
Umatshini wemoto, Toronto
Ilungile kwizifundo zolwimi kunye nokufunda nazo. Ndiyakwazi ukulawula isantya sokudlala okanye isisombululo.
Ukuphinda phinda kwi-intanethi
Ukwabelana ngale webhsayithi sisikhuthazo kwisicelo ekuphuhliseni ezinye izinto eziluncedo
© YouXube 2019 - I-Player Player 0.0.1